चिनिने गोलभेडा खेतीबारे सम्पूर्ण जानकारी - krishipost.com
चिनिने गोलभेडा खेतीबारे सम्पूर्ण जानकारी
गोलभेडा तरकारीको एक प्रकार जो साना-साना बोटमा फल्छ, प्रायः सबै ठाउँमा यो तरकारीको उत्पादन हुन्छ। वैज्ञानिक नाम लिकोपर्सिकोन एस्कुलेन्टमले चिनिने गोलभेडा सोलानासिया परिवार अन्तर्गत पर्ने पोथ्रा वर्गको वनस्पति हो। गोलभेडाको उत्पत्तिको केन्द्र पेरुभियाली तथा मेक्सीकाली क्षेत्र मानिन्छ। यसको साधारण नाम टमाटर (हिन्दी), रमभेडा (नेपाली) पनि हुन्छ।
टमाटर एक महत्त्वपूर्ण ‘संरक्षी खाद्य’ हो, किनभने यसमा धेरै पौष्टिक मूल्य हुनुका साथै यसको व्यापक उत्पादन हुन्छ। आलु र सखरखण्डपछि यो विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो सब्जी हो, तर ‘केप्ड भेजिटेबल’-मा यसको पहिलो स्थान छ। सुप, सलाद, अचार, झोल, टक, सस आदि बनाउन टमाटरको प्रयोग गरिन्छ। पोर्तुगालीहरूले यसलाई भारतमा परिचित गरेका थिए। अहिले यो भारतमा एक महत्त्वपूर्ण तथा लाभकारी सब्जी भएको छ।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र्, कर्णाटका, बिहार, उडिस्सा प्रमुख टमाटर उत्पादन गर्ने राज्य हुन्। सिक्किमको अनुकूल कृषि जलवायु परिवेशको कारण वर्षभरि नै यहाँ टमाटर उत्पादन गर्न सकिन्छ।
पानी तथा सिँचाइ सम्पादन
टमाटरलाई धेरै सतर्कतापूर्वक सिँचाइ गर्नुपर्छ। बालीको ओसको आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति पानीको स्तरले प्रमुख भूमिका खेल्ने देखिएको छ। ठाडो बालीलाई प्रत्येक पाँचदेखि सात दिनको भित्रमा र भुइँमा झ्याँगिएको बालीलाई हरेक १० दिनमा पानी लगाउनुपर्छ।
फल लाग्ने समयमा अचानक धेरै पानी परेपछि सुक्खा अवधि भएमा फल चिरा पर्छ। साधारणत: खुला कुलो बनाएर पनि पानी लगाउने प्रचलन छ। यो विधि धेरै किफायती छ र खुला खेतमा गुणस्तरीय टमाटर उत्पादन हुन्छ।
माथिबाट छिट्ने विधिलाई पनि परिवर्तन गरिएको छ जसले सिँचाइसँग मल पनि प्रदान गर्छ। यो विधि अधिकांश ग्रीनहाउस, ग्लास हाउस वा पोली हाउसमा प्रयोग गरिन्छ।
जलवायुको आवश्यकता सम्पादन
रोग तथा रोकथाम सम्पादन
•ओस लाग्ने रोगको निम्ति ट्रिकोडर्मा हर्जियानम र पेनिसिलियम अक्जालिकमको जीवाणु अनि स्युडोमोनस एकपाकिया र स्युडोमोनस फ्लोरेसिनले बीजको बाहिरी आवरणको उपचार गर्नु जैविक-रोकथामको एक असरदार विधि पाइएको छ। •सोलानासियस (बिरुवाको एउटा जात) बालीभन्दा फरक अरू बालीसँग फसल-चक्र चलाउनुपर्छ।
क. अत्यधिक पानी बहने ठाउँमा बिरुवाको ब्याड हुर्काउनुहोस्। ख. झुरूप्पै बिरुवा लाग्न नदिन पातलो रोप्नुहोस्। ग. बिरुवाको लागि हल्का बलौटे माटो वा बढेको बिरुवाको लागि मिहिन मसिनो बलौटा मिसिएको आराको भुसको मिस्रण प्रयोग गर्नुहोस्। घ. राम्रोसँग सडेको मल प्रयोग गर्नुहोस्। ङ. हल्का तर बारम्बार सिँचाइ गर्नुहोस्, अनि च. ३० सेन्टीमिटर बाक्लो खेतको डाँठ वा ठूटाठुटीहरू बिरुवाको ब्याडमा जलाएर माटोको जीवाणुहरू मार्ने कार्य गर्नुहोस्।
चाँडै लाग्ने ढुसी (अल्टरनेरिया सोलानी) सम्पादन
क. दुई-तीन वर्षमा एकपल्ट सोलानासियस परिवारमा नपर्ने बालीसँग फसल-चक्र चलाउनुहोस्। ख. खेतमा रोग लागेको बोट देख्नेबित्तिकै त्यसलाई उखेलेर जलाउनुहोस्। ग. रोग लाग्नअघि एक हप्ताको फरकमा बोरेडक्स मिस्रण (१ प्रतिशत) बालीमा छर्कनु वा स्प्रे गर्नुपर्छ।
पात दोब्राउने (गेमिनी भाइरस) सम्पादन
मोजाइक अर्थात् टाटेपाटे भाइरस (भाइरस) सम्पादन
टमाटरलाई अनेकौं कीरा तथा कीटपतंगहरूले आक्रमण गर्छन्। यसको रोकथामका केही प्रमुख उपायहरूबारे तल चर्चा गरिएको छ:
यो रोगले आश्रय लिने बोट बैगुन, आलु, टमाटर र खोर्सानी। क्षति तथा लक्षण लाभ्रेको कारणले क्षति हुन्छ। यसको लाभ्रेले कलिलो डाँठ खान्छ, संक्रमित बोट मुर्झाएको देखिन्छ।
रोकथामका उपाय •मुर्झाएको बोट उखेलेर जलाउनुपर्छ। •यो काण्ड छेद गर्ने लाभ्रेको घटना देखिनुअघि नै १५ दिनको फरकमा जैविक-कीटनाशक छर्कनुपर्छ।
सुर्तीमा लाग्ने लाभ्रेकीरा (स्पोडोप्टेरा लिटुरा) यो देशभरि निस्कने एक पोलीफेगस जातको किरा हो।
यो किराले आश्रय लिने बोट सुर्तीबाहेक यसले आलु, टमाटर, चना, मकै र बन्दकोपी आदिलाई पनि आक्रमण गर्छ।
आक्रमणबाट हुने क्षति तथा लक्षण यो लाभ्रेले राति पात, काण्डको कलिलो भाग र फल खान्छ, जसले गर्दा धेरै क्षति हुन्छ। यो अत्यन्त विनाशकारी किरा हो, किनभने यसले पात, काण्ड र फलभित्र छेद वा दुलो पारेर त्यसको भित्री भाग खान्छ।
•नियमित रूपमा खेतबारीको हेरचाह गर्नुहोस्। •लाभ्रेलाई जमा गरेर जलाउनुहोस्। चनाको कोसा दुलो पार्ने छेदक (हेलिकोभरपा अर्मीगेरा) यो भारतभरि पाइन्छ अनि उष्टकटिबन्धीय (गर्मी) तथा उप-उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रमा प्रचुर पाइन्छ।
माटोको आवश्यकता सम्पादन टमाटर विभिन्न प्रकारको माटोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ- बलौटे उर्वर माटो, दोमट माटो, कालो माटो र राम्रो पानी बहने व्यवस्था भएको कालो माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। तर राम्रोसँग पानी बहने, माथिल्लो तहमा हल्का बलौटा र भित्री तहमा राम्रो दोमट भएको माटोमा यसको उब्जनी राम्रो हुन्छ। टमाटरले ठीक्कको अम्लता र क्षार भएको माटो सहन सक्छ। अम्लताको मात्रा ५.५ देखि ७.५ भएको माटोमा यसले उत्तम उत्पादन दिन्छ। सिक्किमको माटो अम्लीय प्रकारको छ, यसैले राम्रो फसल उब्जनीको लागि प्रति वर्ग मीटर २०० ग्रामको दरले डोलामाइट लगाउन सुझाइन्छ।